Mashruuc biyaha iyo fayo-dhawr ah oo socon doona muddo afar sannadood ah oo laga bilaalay deegaannada Puntland. – Radio Daljir
Mashruuc biyaha iyo fayo-dhawr ah oo socon doona muddo afar sannadood ah oo laga bilaalay deegaannada Puntland.
Garowe, Sept 18 – Mashruuc ballaaran oo biyaha iyo fayo dhawrka deegaanka ah soconna doona muddo afar sannadood ah ayaa maanta lagu daah-furay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Mashruucaan oo ay maalgaliyeen midawga Yurub iyo hay?adda Care ayaa laga hirgalinayaa 16 deegaan oo hoos yimaada magaalooyinka Garowe, Qardho, Galkacyo iyo degmada Galdogob ee isla gobolka Mudug halkaasoo laga samayndoono qorshayaal kor loogu qaadayo biyaha iyo nadaafadda.
Inta uu socdo mashruucaani waxaa dayactir lagu samayn doono ilaha wax-soo-saar ee biyaha deegaannada Puntland gaar ahaan dhulka loo qoondeeyey mashruucaan iyadoo wax laga qaban doono ceelasha iyo meelaha kale ee biyaha iyo fayo-dhawr guud ee deegaannada ballaaran ee mashruucaani ka taabbo-gali doono, waxaana taas dhinac socda abuurid ganacsiyo yaryar oo si gaar ah loogu eexin doono haweenka
Munaasabad lagu furayey mashruucaasi ayaa maanta lagu qabtay xarunta magtabadda buugaagta ee magaalada Garowe taasoo ay ka soo qaybgaleen wakiillo matalayey hay?adaha mashruucaan maalgalinayay iyo xubno ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka caafimadka Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame, guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali ?Qarjab iyo mas?uuliyiinta dhinaca tamarta iyo biyaha Puntland.
Mas?uuliyiin kale duwan oo ka socday maalgaliyayaashii mashruucaan ayaa goobtaasi ku sharraxay qaabka iyo qorshaha talo gal ee mashruucu uu noqon doono, muddada socoshi iyo meelaha si rasmiga ah hawlahaan looga hirgalin doono.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame oo mashruucaasi uu wasaaraddiisa ka soo dugaalsaday dhinaca saxada iyo fayo-dhawridda deegaannada shaqada laga qaban doono, ayaa hadal uu ka jeediyey munaasabaddii furitaanka waxaa uu ku sheegay ahmiyadda iyo wax ku oolinada mashruucaan, isagoo tilmaamay faa?ido weyn in uu u leeyahay qaybaha bulsho ee deegaannada laga hirgalinayo.
Sikastaba ha ahaatee haddii si rasmi ah loogu guulaysto hirgalka mashruucaan biyaha iyo fayo-dhawrka waxaan ka faa?idaysan doona sida la tilmaamay illaa 136 kun oo ruux, kuwaasi oo siyaabo kale duwan uga macaashi doona wax-ku-oolinimada mashruucaasi.